Ilayisi elinemifino kanye nososo weSoy | Ukupheka Kwekhishi
Ilayisi elinemifino kanye nesosi yesosi
Loreto | | I-Asian Cuisine, Okufakiwe Okushisayo, General, Ungadliwa Kwemifino, Ukupheka Okulula, Amasaladi
El ilayisi kuyisithako esisinikeza amathuba amaningi, kubanda, kuyashisa futhi kuthosiwe. Ngenxa yokusebenza kwaso okuningi kwenza imisebenzi yasekhishini ibe lula kakhulu futhi namhlanje ngikulethela le recipe yelayisi enemifino nesosi yesoya ukuze ukwazi ukuyithokozela, ngoba nathi siyengezaizithako ezicebile kakhulu.
Njengenjwayelo siyothenga futhi siyazazi ezinye izinto ezibalulekile.
Izinga lobunzima: Kulula
Isikhathi sokulungiselela: Imizuzu engu-30 - 40
Izithako zabantu abangu-4:
80-100 amagremu erayisi ngomuntu ngamunye
Isigamu iklabishi egobile
2 wezipuni soya wesoso
Sesinokuthengwa okwenziwe, manje kuphela Ngidinga ukulungisa lelayisi elimnandi ngemifino y I-soy sauce ukuze sikwazi ukuyidla. Saqala ukusika iklabishi kahle kakhulu, ngangokunokwenzeka futhi sihlaba isanqante. Ngenkathi sise-casserole sibeka uwoyela ukushisa.
Thina usawoti imifino bese uyifaka ku-casserole ngamafutha ngokushisa okuphansi ukuze ziboshwe ngoba asifuni ukuthi zithose, kepha zihlale zithambile. Embizeni, sibeka amanzi ukubilisa ngosawoti omncane namafutha bese uvumela ukuthi abile ukufaka irayisi.
Lapho izingxenye ezimbili seziphelile singazixuba. Kepha okokuqala sizobeka isosi yesoya, ukuze konke kukhulelwe nezinongo ezifanele, simnika okokugcina emlilweni ngamanzi amancane ukuze ihlangane kahle kakhulu. Siyivumela ukuthi iphumule kancane futhi izolungela ukudliwa.
Njengoba ubona Kulula ukwenza futhi kusivumela ukuthi sidle ukudla okubili okusiza kakhulu kupuleti elilodwa. Ungakhohlwa ukuthi noma iyiphi iresiphi ingashintshwa kulwanga lwethu, njengokungeza u-anyanisi omncane noma ugalikhi, Kungabuye kube inketho enhle. Noma ezinye izithombo zasolwandle ezomiswe ngamanzi, Konke kuncike kulokho esikuthandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » I-Recetas del Mundo » I-Asian Cuisine » Ilayisi elinemifino kanye nesosi yesosi
siklwebha -> siyaklwebha
imifino -> thumba
okunoshevu -> kuzuzisa
Kulungisiwe, ngiyabonga ngeminikelo.
Ngendlela, sengivele ngiyizamile, ngo-anyanisi nengcosana yejinja, futhi beyiyinhle kakhulu 😉